: at 7/24/2009 02:00:00 AM
“သူခိုးဖမ်းပေးသည့် သရဲ ”
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က မလေးရှားနိုင်ငံမှာ အိမ်ရှင်ကို ကူညီသည့် သူရဲ အကြောင်း ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် သိရပါတယ်။
အိမ်ရှင် ပြန်ရောက်တော့ အိမ်ထဲမှာ အစာရေစာပြတ်လပ်ပြီး အင်အားချိနဲ့ နေတဲ့ သူခိုးတစ်ယောက်ကို ခိုးထုပ်ခိုးထည် ခိုးရာပါပစ္စည်း အပြည့် အစုံနဲ့အတူ တွေ့ ရတာကြောင့် ရဲစခန်းကို အပ်လိုက်ပါတယ်။
ရဲက သူခိုးကိုစစ်ဆေးရာမှာ သူခိုးက သူ့ကို အဲဒီအိမ်မှာ ဖမ်းတာခံလိုက်ရေကြောင်း ရဲစခန်းမှာ ထူးဆန်းဖွယ် မယုံနိုင်ချင် စရာ ဖြောင့်ချက်ပေးပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဗိုက်ဆာလို့ မီးဖိုထဲက အစားအသောက်တွေ ယူစားမယ်လုပ်ပြန်တော့ ဘာမှ စားသောက်လို့မရနိုင်အောင် သူ့ပါးစပ် ဟလို့မရအောင် လုပ်ထားပြန်ပါသတဲ့။ သူခိုးက ပစ္စည်ေးတွ ယူပြီးပြေးဖို့ကြိုးစားပြန်တော့ အိမ်ကြမ်းပြင်ပေါ် တွန်း အလှဲခံရ။ အစားအသောက်ကြပြန်တော့လည်း ယူစားလို့ မရနဲ့သူရဲက အမျိုမျိုးလုပ်ထားတာကြောင့် နောက်ဆုံး အားပြတ်ပြီး ၄ ရက် မြောက်မှာ အိမ်ရှင်တွေ ရောက်လာပြီး အခုလို အဖမ်းခံလိုက်ရတာပါတဲ့။
(ယုံ လို့ရ ပါသေးတယ် နော် )
ဗွီအိုအေ သတင်း==(၁၆။၁၂။၀၈) မနက် ၆.၃၀ ။
အပေါ်က ပုံလေးကို ဒီက ယူထားပါတယ် ။
အချစ်ကို စိတ်နာပြီး ရုရှား လူငယ် ၂ဦး ကိုယ့် ငယ်ပါ ကိုဖြတ်
မော်စကို မတ် ၂၆
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့တွင်နေထိုင်သော အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ်ရှိ လူငယ်တစ်ဦးမှာ ဆန့် ကျင်ဘက် လိင်များကို စိတ်ကုန် သဖြင့် ၄င်း၏ ငယ်ပါအား ကတ်ကျေးတစ်လက်ဖြင့် ဖြတ် တောက် ဖယ်ရှား မှု ပြုလုပ်လိုက်ကြောင်း Pravda သတင်းဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
မိမိအနေဖြင့် မည်သည့် အမျိုသမီးနှင့်မျှ ဆက်ဆံမှု မပြုလိုသဖြင့် ကတ်ကျေးကိုအသုံးပြုလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိအော်ဟစ်သံကို ကြားရပြီးနောက် မိမိအားနီးရာဆေးရုံသို့ အချိန်မှီ တင်ပို့ခဲ့သည့် အိမ်နားနီးချင်းများကို ကျေးဇူး တင်ကြောင်း အဆိုပါအမည်မဖော်လိုသူ ကာယကံရှင်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပ် ပုဂ္ဂိုလ်မှာ အန်ဒရီအမည်ရှိ ၄င်း၏ချစ်သူ မိန်းကလေးနှင့် စကားများ ရန်ဖြစ်ပြီးနောက် အထက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရုရှားနိုင်ငံတွင် မကြာသေးမီကလည်း စပါးတပ်စ် မော်စကို မသန်စွမ်းဘောလုံးအသင်းမှ ဘောလုံးသမားတဦးမှာ ကတ်ကျေးအသုံးပြုပြီး ဖယ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခဲ့သေးသည်။
Foreign Affairs vol1 /No 7
(အဲဒါလေးတွေ ကတော့ ဖြစ်တတ်စွာ .. ဖြစ်တတ်စွာ ...ရုရှ ပြည်ရောက် ပြည်ချစ်သားများ အတုယူ မမှားကြစေလိုပါ ။ ဖုန်းကညာ တပါး လုံး ရာ မှ ပြား ဆိုလျှင် .....)
ဒီနေရာ မှ ဒီသတင်းတွေ ကို ရယူ ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
:kiki : at 7/24/2009 02:00:00 AM
မငုံ said... | Friday, July 24, 2009 2:42:00 AM
အဲဒီ သရဲမျိုး ဘွား အိမ်မှာမွေးထားလား?? နောက်အပိုင်း ၂ မျှော်နေ၏။
ခြေလှမ်းသစ် said... | Friday, July 24, 2009 3:49:00 AM
ဖွားကီရေ.. အပေါ်က သူခိုးဖမ်းတဲ့ သရဲကို ဈေးကွက်ထဲ မှာ မရောင်းဘူးလားဗျို့ .... အောက်က ဇတ်လမ်းကတော့ ... ကြောက်ခမန်းလိလိပဲဗျို့ ... စိတ်ကုန်သွားတဲ့ သတ္တိ လို့ ထင်ပါတယ်..
thawzin said... | Friday, July 24, 2009 3:52:00 AM
ဟဟ သရဲမဟုတ်ဘူးအဲဒါ ဥစ္စာစောင့် သူခိုး ခိုးသွားတဲ့အထဲမှာ သူ့ပစ္စည်းပါလို့နေမှာ....
ဖုန်းကညာတစ်ပါး လုံးရာပြားသည့်အထဲ မြန်မာတွေ မပါပါဘူးဗျာ....
ကိုလူထွေး said... | Friday, July 24, 2009 4:04:00 AM
အပြောနှင့်မပြီး... လက်တွေ့ပြမှ ယုံမှာဖြစ်ပါကြောင်း... ဖွားကိဆိုသူဟာ ငယ်ငယ်က ယောက်ျားလေးပါဆိုတာကို အားလုံးသိအောင် လက်တွေ့ပြပါ...
ဟိုလူမေးငေါ့ ဒီလူမေးငေါ့.. အဲဒါ
သားကြီး said... | Friday, July 24, 2009 4:09:00 AM
ကြံကြံဖန်ဖန် သတင်းထူးတွေ ကိုယ့်အစ်မ အလွန်ရှာတတ်
ဝက်ဝံလေး said... | Friday, July 24, 2009 5:12:00 AM
ဟဟဟ ဂယ်ပဲ ဂယ်ပဲ ထူးဆန်းတယ် သတင်းတွေကတော့ ဟွန်းးး များက အိမ်မှာ ၁ ယောက်တည်းပါဆိုမှ သရဲအကြောင်းပြောတယ် မအိပ်ရဲရင် သူ့ကြောင့် ဟွန်းးး
kyalkalay said... | Friday, July 24, 2009 5:51:00 AM
သရဲ တောင်မွေ: ထားရမလို ဖြစ်နေပီ
ရုရှား မှာ အဒါတွေ သင်လာအုံးမယ်(ပညာ)းP
Sein Lyan said... | Friday, July 24, 2009 5:59:00 AM
ငယ်ပါ ဖွားဘက်တော်ကိုတော့ ဘာအကြောင်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ဖြတ်ပါဘူး....
မျက်နှာမြင်ရင် သရဲက ကြောက်တယ်ဆိုတော့လေ...
s said... | Friday, July 24, 2009 6:01:00 AM
ကြောက်စရာ အထူးအဆန်းသတင်းတွေကိုလာဖက်သွားပါတယ် မမ ရေ။
ရေတမာ said... | Friday, July 24, 2009 7:37:00 AM
ဖြတ်လိုက်တဲ့ ငယ်ပါတွေကို fighting ball ဆိုပြီးရောင်းစားပစ်ရမယ်။
rose of sharon said... | Friday, July 24, 2009 7:46:00 AM
မျက်မှန်လေး said... | Friday, July 24, 2009 8:23:00 AM
သူ့ရည်းစားတစ်ယောက်ကို စိတ်နာတာနဲ့ဘဲ လူညွန့်တုန်းအောင်လုပ်ပစ်လိုက်တယ်တဲ့.
ဂျပန်ကောင်လေး said... | Friday, July 24, 2009 9:22:00 AM
ဘုရား ဘုရား..ကြားရတဲ့ သတင်းတွေက..ရင်ထိတ်စရာတွေပါလား....
မေဇင် said... | Friday, July 24, 2009 9:58:00 AM
သူရဲ ကတော့ အိမ်စောင့်ပေးပစေ...မလိုချင်ဘူး... ဟိဟိ အောက်က သတင်းတွေ ကတော့... ရီချင်စရာပဲ
Anonymous said... | Friday, July 24, 2009 11:40:00 AM
ကြီးတော်ကီ အဲလိုသရဲမျိုး မဆိုးဘူးနော်။ အသုံးတော့ ၀င်သားပဲ။ မွေးရင်ကောင်းမယ်။ ဟိး ကြောက်တယ်။
HRmyanmar said... | Friday, July 24, 2009 12:41:00 PM
ဒီလို သရဲလဲ ရှိတာပဲကိုး
မြစ်ကျိုးအင်း said... | Friday, July 24, 2009 6:34:00 PM
သရဲတော့မဟုတ်နိင်ဘူး ဥစ္စာစောင့်ပဲ ဖြစ်မယ်
သူ့ဥစ္စာသူမစောင့်ဘဲ အိမ်ရှင်ဟာ စောင့်ပေးတာကိုး...။
၃၇ နှစ်က လူငယ်တဲ့လားမကီရဲ့
အခုလောက်ဆို ဖြတ်လိုက်တဲ့သူ ယိုးဒယားရောက်နေ လောက်ရောပေါ...။
ပေါက်ပေါက်ရှာ ရှာ တင်ပေးတဲ့ မကီ နံပါတ်၂ မှာ ဘာဖြတ်တဲ့အကြောင်းလာအုံးမလဲ...
Khyl said... | Friday, July 24, 2009 9:49:00 PM
တော်တော်ဆိုးတဲ့ လူပဲ.... ဂလောက်တောင်ပဲ စိတ်နာရလား... လူပေါင်းမှားတာ တော်တော် ဆိုးပုံရတယ်... ဟိ...
သူရဲလဲ.... စိန်ပြေးတန်းကစားရတာ တော်တော် ပျော်သွားပုံရတယ်နော်... ဟိဟိ... သူခိုးကိုကြည့်ပြီးရီနေမှာပဲ...ဘရုတ်သရဲ... ဘရဲသရုတ်...
ရွှေပြည်သူ (ShwePyiThu) said... | Saturday, July 25, 2009 7:44:00 PM
ပထမသတင်းကတော့ သဘောကျစရာ။ သူခိုးခမျာတော့ တော်တော် ခြောက်ခြားနေမှာပဲ။ နောင် ထပ်ခိုးဆိုရင်တောင် ခိုးရဲပါတော့မလား မသိဘူး။
ဒုတိယသတင်းကတော့ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေလို့ပဲ ပြောရတော့မှာပဲး)
ရှာရှာဖွေဖွေတွေ ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ Kiki ရေ
Aye said... | Sunday, July 26, 2009 5:10:00 AM
အစ်မကြီးကိ့ရေ....လာဖတ်မိတာမှားပြီထင်တယ်. ညတစ်ခေါင်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိလို့အစ်မစာကိုလာဖတ်မိပါတယ် အပြင်မှာကလည်းမှောင်မှောင်ကြီးထဲမှာ သစ်ကိုင်ကလှုပ်တုတ်တုတ်နဲ့ commentရေးရတာတောင်လှုပ်တုတ်တုတ်ဖြစ်လာပြီ ...အဟီးးးးးးးသူများကြောက်လာပြီ အစ်မလုပ်လို့.....ဟီးးးးး ရွှတ်ရွှတ်...ပြေးမှပဲ.......
နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကလည်းဘာကြီးမှန်းကိုသိတော့ဘူးမျက်စေ့ပိတ်သွားပြီ ဖတ်တော့ဘူး ......သူများကအသည်းငယ်တတ်ပါတယ်ဆို....သွားပြီအစ်မရေ.....
Anonymous said... | Sunday, July 26, 2009 8:05:00 PM
ပို့စ်ရေးတာ ကြိုက်သလို လွတ်လပ်စွာလူတိုင်းရေးလို့ရတယ်..ဒါပေမယ့် ရုရှားက မြန်မာတွေကိုတော့ တိုက်ရုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေ ကြောင်တောင်တောင်စကားလုံးများ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့စောက်ကျင့်အတိုင်း ရွှဲ့သလိုလိုစောင်းသလိုလိုစကားမျိုးမပြောပါနဲ့...ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ရုရှားကကောင်တွေက မင်းတို့ကို ဘာမှ ရန်စရန်ပြုနေတာမဟုတ်သလို ရုရှားကမြန်မာတွေက သန်းရွှေလည်းမဟုတ် အာဏာရှူးလည်းမဟုတ်ဘူး တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မယ့်ကောင်တွေလည်းမဟုတ်ဘူး...အဲဒီတော့ သန်းရွှေ့ကိုပြောချင်ပြောပါ..ရုရှားကကောင်တွေတော့ လာမထိနဲ့...okay?